चितवन निकुञ्जको जमिन अतिक्रमण – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
चितवन निकुञ्जको जमिन अतिक्रमण
२०७० माघ १९, आईतवार ०३:२३ गते
कसरा । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको एक हजार १६ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको छ । अतिक्रमण गर्नेमा सुकुमबासीदेखि स्वामीहरुसम्म रहेका छन् । निकुञ्जले निकालेको आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० को वार्षिक प्रतिवेदनमा अतिक्रमित जमिनको विवरण उल्लेख भएको छ ।
समूहबाहेक व्यक्तिहरुले पनि ठाउँ–ठाउँमा निकुञ्जको जमिन अतिक्रमण गरेको निकुञ्जले जनाएको छ । सवैभन्दा धेरै माडी अयोध्यापुरी गाविसको वडा नं. ९ बाँदरझुलामा ४५१ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाँदरझुला क्षेत्र निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत पर्दछ । सो ठाउँमा विसं. २०४७ सालदेखि नै अतिक्रमण सुरू भएको हो । हाल सो क्षेत्रमा ४५६ घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । संकटकाल लागेका बेलामा विस २०५८ सालमा त्यहाँको बस्ती उठाइएको थियो । तरपछि फेरि मान्छेहरु गएर बस्न थालेका हुन् ।
बाढी र पहिरोका कारण घरबारविहीन भएकाहरु बसेकाले राज्यले त्यहाँ थुप्रै स्थायी संरचनाहरु बनाएको छ । निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र भए पनि बाँदरझुला बस्ती अब उठाउन असम्भवजस्तै बनेको छ । राजनैतिक दलहरुले बाँदरझुला बस्ती स्थानान्तरणका बारेमा कुरै उठाउन छाडेका छन् ।
त्यस्तै, मकवानपुरको मनहरी गाविस वडा नं. २ सुनाचुरीमा पनि निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गतको जमिन अतिक्रमण भएको छ । पहाडी क्षेत्रमा बाढी पहिरो लागेर विस्थापित भएकाहरु ५९ सालमा सो ठाउँमा आएर बस्न थालेका हुन् ।
सो क्षेत्रको ११४ हेक्टर भू–भाग अतिक्रमित भएको निकुञ्जको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यहाँ १५६ घरपरिवार बसोबास गर्छन् । चितवन निकुञ्जले ६८ सालमा त्यहाँको १५ हेक्टर जमिन खाली गराएको थियो । निकुञ्जले ५५ घरलाई उठाएको थियो । अरुलाई उठाउन सकेको छैन ।
मध्यवर्ती क्षेत्रमा सुकुमबासी आएर बसेका छन् तर निकुञ्जकै साँध सिमानाभित्र स्वामी कमल नयनाचार्यले भव्य आश्रम र मन्दिर बनाएका छन् । निकुञ्जको नवलपरासी गजग्राह पोष्ट क्षेत्रको १५ हेक्टर जमिन अतिक्रमणमा परेको निकुञ्जले निकालेको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
सो अतिक्रमण हटाउन निकुञ्जको प्रयासले मात्रै नसकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आश्रम क्षेत्रलाई पहँुचवालाको संरक्षण रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । गजेन्द्र मोक्षधाम खडा गरेर कमल नयनाचार्यले भव्य मन्दिरहरु बनाउँदै आएका छन् ।
नवलपरासी नयाँबेल्हानी गाविसको तमासपुरमा रहेको ठूलोपोखरी मध्यवर्ती सामुदायिक वनको १५ हेक्टर जमिन पनि अतिक्रमणमा परेको निकुञ्जको भनाइ छ । सो ठाउँमा विसं.२०३६ सालदेखि अतिक्रमण सुरू भएको निकुञ्जले जनाएको छ ।
समूहगत नभएर नम्वरी जग्गाको आडमा रहेको निकुञ्ज र मध्यवर्ती सामुदायिक वनको जमिन अतिक्रमण गर्ने प्रचलन पनि रहेको छ । यसरी विभिन्न ठाउँमा गरेर ठूलो मात्रामा जमिन अतिक्रमण भएको निकुञ्जले निकालेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चितवनको अयोध्यापुरी, गर्दी, पटिहानी, मेघौली, गीतानगर, नवलपरासीको कुमारवर्ती, नारायणी, दिब्यपुरी, मुकुन्दपुर र पर्सा जिल्लाको ठोरी र निर्मलवस्ती गाविसहरुमा त्यस प्रकारले निकुञ्जको क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ४२१ हेक्टर जमिन यसरी अतिक्रमित भएको छ ।
[divider]गजग्राह त्रिवेणी ः चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले निकालेको प्रतिवेदनमा अतिक्रमित भूमि भनेर उल्लेख गरिएको क्षेत्रमा बनेको गजग्राह मन्दिर ।
इमेल : c[email protected]